बढ्दो शेयर बजारमा राजनीतिको छायाँ
अर्थ/बजार सोमबार, फागुन २७, २०७५
रुसले क्रिमियालाई यूक्रेनबाट अलग्याएर आफ्नो भूभागमा विलय गर्दा होस् वा बेलायतमा भएको जनमत संग्रहले यूरोपेली यूनियनबाट अलग्गिने निर्णय हुँदा होस्, त्यहाँका शेयर बजार सूचकहरु भारी मात्रामा खस्किएका थिए ।
गत महीना कास्मीरमा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी हमला भएपछि बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज ३०० अंक घटेको थियो, जुन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले तनावलाई व्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्ने घोषणा गरेपछि बढ्न थाल्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरुले राजनीतिक संकटका बेला शेयर बजार ओरालो लाग्ने गरेको देखाएका छन् । तर, नेपालमा स्थीर सरकार गठन भएपछि ओरालो लाग्न थालेको शेयर बजार अहिले पनि ‘वियरिश’ प्रवृत्तीमै छ ।
तथापी, अल्पकालीन व्यापार प्रवृत्ती हेर्ने हो भने पछिल्ला पाँच दिनमा नेप्से ४२ अंक बढेको छ । हालैका दिनमा एकातिर विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि बढाएको र अर्काेतिर तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सीके राउतले ‘मूल धारको’ राजनीतिमा आएको घोषणा गरेका छन् ।
पाँच दिनयता बढ्न थालेको नेप्से सूचकांकले शेयर बजारको ‘यू टर्न’लाई संकेत गर्छ या गर्दैन भन्नेमा स्पष्ट नभइसकेको विश्लेषक र ब्रोकरहरु बताउँछन् । “पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममले शेयर बजारलाई अहिले नै प्रभावमा ल्याइसकेको छैन”, एक ब्रोकर भन्छन् ।
नेप्सेको रेखाचित्र विश्लेषणले पनि अहिले नै नेप्सेले बाटो बदलेको भन्ने यथेष्ट आधारहरु दिँदैन । १९ फागुनमा नेप्से सूचकांक ११०० अंकमा पुगेर फर्किएको छ । यो पछिल्लो ‘वियररन’ (घट्दो प्रवृत्ती)को सबैभन्दा न्यूनतम विन्दु हो ।
घट्दो बजारमा नयाँ टेवा विन्दु अर्थात् सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पुग्ने गति नरोकिनुले बजारको घट्दो क्रमको ‘निरन्तरता’ बताउँछ । तथापी यो नै सबैभन्दा तल्लो विन्दु हुनसक्ने सम्भावना छ, तर त्यो कुरा प्राविधिक रुपमा पुष्टी गर्न अझै केही साता कुर्नुपर्नेछ ।
अर्कोतिर ११०० आफैंमा मनोवैज्ञानिक टेवा हो । हाम्रोजस्तो कम विकसित बजारमा ‘सय अंक’मा बजार पुग्नुलाई स्वभाविक टेवा वा प्रतिरोध मानिन्छ ।
यसको मतलब १०० अंकमा पुगेपछि बढिरहेको बजार घट्ने वा घटिरहेको बजार बढ्ने हुन्छ । यो साताको व्यापार प्रवृत्तीमा आएको परिवर्तन त्यस कुराले पनि अर्थ राख्छ ।
सामान्य रेखाचित्र विश्लेषण अनुसार अझै कम्तिमा ४६ अंक बढेपछि नेप्सेको रेखा कता लाग्छ भन्ने कुराले भविष्यको बाटो देखाउने छ । यसअघि दुई पटक यसरी नै न्यूनतम विन्दुबाट उठेको बजार नयाँ प्रतिरोध बनाउँदै ओरालो लागेको थियो ।
जसअनुसार ११६४ अंकबाट उकालो लागेको नेप्से करीब १० प्रतिशत बढेर १२८० अंक पुग्यो र त्यसपछि पुनः घट्न थाल्यो । लगातार ओरालो लाग्दा १११८ अंकमा झरेर पुनः बढ्न थालेको नेप्सेको सूचकांकले १२१६ अंकमा नयाँ प्रतिरोध बनायो ।
घट्दो क्रममा ९ प्रतिशत अंक गुमाउँदै न्यूनतम विन्दु ११०० बाट बढेर अहिले ११४३ अंकको नजिक पुगेको छ ।अबको वृद्धि ८ प्रतिशत हुने मान्ने हो भने यो बढ्दो दर ११८८ अंकसम्म पुग्नसक्छ ।
त्यसपछि पनि बजार उकालो लाग्दै गयो वा केही घटेर ११०० अंकसम्म नझरी फेरी बढ्न थाल्यो भने नेप्सेले बाटो बदलेको संकेत मिल्छ । ११०० अंकभन्दा पनि तल झरेमा चाहिं वियरिस प्रवृत्तीको निरन्तरता सम्झनुपर्छ ।
आजको व्यापारमा नेप्सेमा रु. ४० करोड २८ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । १७१ कम्पनीको १३ लाख ४७ हजार कित्ता खरीदबिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ । यो विगत केही साताको व्यापार पवृत्तीका आकारमा आकर्षक हो ।
परिसूचकसँगै कारोबार बढ्नुले शेयर बजारमा माग बढ्न थालेको संकेत गर्ने हुँदा आगामी केही दिन बजार उकालो लाग्ने देखिन्छ । आजको बजार पूँजीकरण रु. १३ खर्ब ९५ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ ।
सर्वसाधारण स्वामित्वमा रहेको शेयरको कूल बजार मूल्य (फ्लोट बजार पूँजीकरण) रु. ४ खर्ब ९० अर्ब ३२ करोड नाघेको छ । आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक रु. २ करोड ८९ लाखको शेयर किनबेच भयो । महंगिने कम्पनीको सूचीमा ङादी पावर कम्पनी पर्‍यो भने सेण्ट्रल फाइनान्सको शेयर मूल्य सर्वाधिक सस्तियो ।